Fitaovana fiarovana ny fizahan-tany vaovao an'ny polisy espaniola ho an'ny Camino de Santiago Pilgrimmage
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Espaniola » Fitaovana fiarovana ny fizahan-tany vaovao an'ny polisy espaniola ho an'ny Camino de Santiago Pilgrimmage
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Fivahinianana masina any Camino de Santiago
Ny Camino de Santiago, fantatra amin'ny teny anglisy hoe Way of St. James, dia tambajotranà fivahinianana masina mankany amin'ny toerana masin'ny apôstôly Saint James the Great ao amin'ny katedraly Santiago de Compostela any Galicia any avaratrandrefan'i Espana. Ny lovantsofina dia milaza fa ny sisa tavela amin'ny olo-masina dia milevina eto.
"Protegemos el Camino: Año Jubilar 2021-2022" dia midika ara-bakiteny hoe: Miaro ny làlana isika: Jobily taona 2021-2022.
Misy programa vaovao mikendry ny hiaro an'i Camino de Santiago mba hahafahan'ny mpivahiny sy ny mpizahatany mankafy tontolo azo antoka.
Ho fanampin'izay, ary amin'ny maha-zava-baovao azy, ny paositry ny polisim-pirenena eny an-dàlana dia ho ivon-toerana ofisialin'ny fametahana mari-pankasitrahana ihany koa.
Ny Tale jeneralin'ny polisim-pirenena, Francisco Pardo Piqueras, dia nanolotra ny programa "Protegemos el Camino: Año Jubilar 2021-2022" izay mikendry ny hiantoka ny fiarovana ireo mpivahiny izay mandeha amin'ny dingana samihafa amin'ny Camino de Santiago any Espana.
Avy amin'ny biraon'ny Polisim-pirenena dia hisy polisy hapetraka eny an-dalana izay ho toerana ifandraisan'ireo mpivahiny ary hiara-hiasa amin'ireo andrimpanjakana sy maso ivoho voakasik'izany. Ireo gara ireo dia ho ivon-toerana ofisialy amin'ny fametahana mari-pahaizana, fitakiana ilaina amin'ny fahazoana ny "la Compostela" raha vantany vao nahavita ny Camino izy ireo.
Ny fampahalalana sy ny fitaovana dia misy kaody QR hahazoana miditra haingana amin'ny habaka natokana ho an'ny tranonkalan'ny Polisim-pirenena, polisia.es, mba hampiroboroboana ny taonan'ny jakoney azo antoka tany Espana. Ao anatin'izany, ireo mpivahiny dia hahita torohevitra fiarovana, ny geolocation ny tobin'ny polisy akaiky indrindra, ireo teboka nohamafisin'ny zotra, ary ny fahafaha-misintona ny karatra fitomboka. Ny laharam-pahamehana dia 091.
Ny polisy avy any amin'ny firenen-kafa, avy any Allemà, France, Italia, ary Portiogaly, dia hanohy ny fisafoana amin'ireo mpikambana ao amin'ny Polisim-pirenena hanampy ireo mpivahiny sy mpizahatany vahiny. Ny andraikitr'izy ireo dia ny, inter alia, mba hanao fisafoana, indrindra ny mandeha an-tongotra, fa ny fiara ihany koa, hisorohana ny asan-dahalo amin'ny lalam-bahoaka.
Izy ireo koa dia hifandray amin'ireo olom-pirenena amin'ny ankapobeny ary, indrindra indrindra, amin'ireo mpizahatany mizaka ny zom-pireneny hanampy azy ireo amin'ny asa fandikan-teny ary hanampy sy hanohana azy ireo amin'ny fitarainana. Ireo polisy vahiny dia hanao fisafoana manao fanamiana nasionaly.
Nanao izao toro-hevitra izao ny Polisim-pirenena: